जेलबाट छुटेलगत्तै यी हिरोइनसँग पार्टीमा देखिए सलमान, के छ अबको प्लान ? [फोटो सहित] - pnpkhabar.com
You are at:Home»फोटो फिचर»जेलबाट छुटेलगत्तै यी हिरोइनसँग पार्टीमा देखिए सलमान, के छ अबको प्लान ? [फोटो सहित]
जेलबाट छुटेलगत्तै यी हिरोइनसँग पार्टीमा देखिए सलमान, के छ अबको प्लान ? [फोटो सहित]
By पूजा बानियाँ on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:२४ फोटो फिचर
मुम्बइ। ५ वर्षको जेल सजाय पाएपनि २ दिनमै जमानतमा छुटेका बलिउड सुपरस्टार सलमान खान आइतबार राति पार्टीमा देखिए । जेलबाट छुटेपछि उनी विश्राम नगरी लगातार कुनै न कुनै कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् । यो पार्टीमा उनी बलिउडका अर्का स्टार रितेश देशमुखको गाडीमा पुगेका थिए ।
फिल्म रेस–३ मा सँगै काम गरेका अर्का स्टार शाकिब सलिमको बर्थडे पार्टीमा सलमान रितेशको कारमा पुगेका थिए । पार्टीमा फिल्मकी अर्की सहकर्मी ज्याकलिन फर्नान्डिज सलमानसँगै देखिइन् । यसबाहेक बबी देओल र फिल्मका निर्माता रमेश रतानी पनि पार्टीमा देखिए ।